यसकारण दुखि भइन भाइ जन्मिदा केकी अधिकारि ! हेर्नुहोस् .... - Sudur Khabar
admin January 12, 2018 मनोरञ्जन 0
Total Reader : 84
अभिनेत्री केकी अधिकारीको पछिल्लो फिल्म हो राज्जा रानी । सिनेमाबाट यसपटक बक्स अफिसमा नायिका केकी अधिकारी र नायक नाजिर हुसेनलाई अवसर र चुनौती दुबै छ । यसैले, चलचित्र ‘राज्जा रानी’ केकी र नाजिर दुबैका लागि विशेष छ । यो चलचित्र चलेको खण्डमा केकी र नाजिर दुबैलाई क्रेडिट जानेछ ।
यम थापाले निर्देशन गरेको यो चलचित्रलाई एम के पौडेलले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रको ‘चिपक चिपक’ बोलको गीत चर्चामा छ । यसै शिलशिलामा आज हामीले केकि अधिकारीको बाल्य, किशोर अबस्था र सिनेयात्राबारे खुल्दुली डट कममा उनले बताएका प्रसंग प्रस्तुत गर्दै छौ उनकै लयमा ।
यो काले को हो भनेर म धेरै रोए रे
मेरो जन्म काठमाडौँको वौद्धमा भएको हो । मेरो घरमा बाबा आमा एउटा र भाई र म छौ । भाईले पनि थिएटरमा काम गरिरहेको छ । शिल्पी थिएटरमा उसले क्लासहरु लिईरहेको छ । उसको निर्देशन मात्र नभएर राईटिङ्गमा ईच्छा छ ।
सानोमा म एकदमै बदमासी नगर्ने बच्चा हो । मेरो आमाले अहिले पनि भन्नुहुन्छ । आमा–बाबाको त म प्यारी छोरी हो । म बाबा संग एकदमै पुलपुलिने गर्थे । बाबा दिउँसो काममा जाने भएकोले राती बाबा आएपछि उहाँसंग म सबैको कुरा लगाउँथे । चित्त दुखेको कुराहरु भनिहाल्थेँ । जुनदिन मेरो भाई जन्मिएको थियो त्यो दिनमा यस्तो दुखी भएको थिए किनभने मैले पहिलो चोटी मेरो बाबा आमाको काखमा आफूलाई नपाएर अर्को नयाँ बच्चालाई पाए ।
त्यो कुरा पत्याउन मलाई गाह्रो भएको थियो । त्यो क्षण मलाई याद छ । बाबु त्यो बेलामा म भन्दा कालो थियो त्यसपछि मैले बाबा ममीलाई यो काले को हो भनेर म धेरै रोए रे भन्नुहुन्छ । म रोएको देखेर झन आमालाई पनि चित्तदुखेको रहेछ । यो कुरा भने म निकै सम्झिन्छु ।
म टम ब्वाय जस्तो थिए
मलाई जे कुराको पनिअलि बढी नै चासो हुन्थ्यो र म जे कुरा पनि थाहा पाउन खोज्थे । त्यो हिसाबमा भने म निकै बदमास थिए । म टम ब्वाय जस्तो थिए । म डल संग खेल्न रुचाउँदैन्थेँ । मैले एक दिन के हुदोँ रहेछ त भनेर केराउका गेडा नाक र कानमा हालेर राखेको थिए ।
त्यस्तो काम गर्न निकै म लाग्थ्यो । म अरुको लागिभने निकै ज्ञानी बच्चा तर भित्र भित्र भाईलाई भने म एकदमै पिट्थे । रिमोटको निहँुमा भाई संग निकै झगडा पथ्र्यो । भाईको एकदमै हात छिटो चल्ने । विस्तारै नराम्रो बानी घट्दै गयो । अहिले त संसार मै कसैको बढी माया लाग्छ भने त्यो भाई नै हो ।
तनाव भएको बेलामा मेरो पनि दिमागले काम नै गर्दैन्थ्यो
समय र तनाब व्यवस्थापन भने निकै ठूलो समस्या नै हो हामी सबै जनाको जीन्दगीमा । यो फिल्डमा भने सबै चिज व्यवस्थापन भएन भने सबै चिज गडबड हुन्छ । त्यो बेलामा न तपाई राम्रो संग काम गर्न सक्नुहुन्छ न तपाई काममा ध्यान दिन पाउँनु हुन्छ । समय व्यवस्थापन गर्नु पर्छ त्यो अघि तपाईले तनावलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । त्यो भयो भने मात्र तपाईको दिमागले कुन समय के सिध्याउने हो भनेर अडकल गर्न पाउँछ । यो चिजहरुले धेरै महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ ।
तनाव भएको बेलामा मेरो पनि दिमागले काम नै गर्दैन्थ्यो, निन्द्रा भोक पनि लाग्दैन्थ्यो । यस्तो दिनहरु प्नि थियो परिक्षाको बेलामा । त्नावमा भएको बेलामा सकेसम्म आफ्नो दिमागलाई फ्री राख्ने तनाव नलिने नै गर्छु । त्नाव नलिन तपाईले आफ्नो समयको उपयोग गर्न सिक्नु पर्छ ।
भोलीको लागि काम नै नसाँच्नु । दुईवटा चिज एकै चोटी सोंच्ने होईन । एक समयमा एउटा मात्र कुरा सोच्नुे गर्नुपर्छ । स्कुलमा म जहिले पनि प्रथम हुने विद्यार्थी हो । मैले थोरै पढ्दा पनि मेरो दिमागमा छिटै सेट हुन्छ ।
न्यूटनको फरमुला मनपर्ने गीतको धुनमा मिलाएर पढ्थे
म प्लस टू मा विज्ञान विषय लिएर पढेको हो । विज्ञानको विद्यार्थी भएकोले फिजिक्स पढ्नु नै पथ्र्यो । न्यूटनको फरमुला पढ्ने समयमा मैले आफूलाई मनपर्ने गीतको धुनमा मिलाएर पढ्थे । आफूलाई जुन तरिका ठिक लाग्छ त्यो पत्ता लगाएर पनि पढ्न सकिन्छ । पढाईको कुरालाई लिएर घरमा केही पनि समस्या भएन । मलाई धेरै पढाईमा समय नदेऊ पनि भन्नु हुन्थ्यो । म धेरै किताब पढ्नेमा पर्थे ।
मलाई परिवारमा धेरै पढेर तनाव नलेऊ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । स्कुल भरीमा डिस्टिङशन होल्डर नै म मात्र हो । मेरो स्कुलको नाम बाल सिर्जनालय स्कुल हो । यो मेरो बाबा आमा आफैले खोलेको स्कुल हो । म जहिले प्रथम हुन्थेँ । म प्रिन्सिपलको छोरी हुनाले प्रश्न थाहा पाएर प्रथम भए भन्ने कुरा आउँथ्यो । यो हिसाबले म कहिले पनि जस नपाएको विद्यार्थी हो । मैले त्यही भएर एस.एल.सी. मा देखाउनु पर्ने थियो । मेरो एस.एल.सी. मा पनि राम्रो नै नम्बर आयो ।
हार्नु नै जित हो यो कुरा अहिले बल्ल थाहा पाए
मलाई किशोर अवस्थाको धेरै कुराहरु याद छैन । तर, म संग साथीहुनेहरु भनेको मलाई थाहा भए सम्म पढाईको फाईदा लिनेहरु हुन्थेँ । किनभने म गणितको राम्रो विद्यार्थी थिए । परिक्षा नजिकिदैँ जाँदा मेरो साथीहरु बढ्दै जान्थेँ ।
म आफै आफ्नो एउटा प्रतियोगी झै थिए । अहिले भने त्यो बेलामा मैले सहि गरेँ झै लाग्दैन किनभने जहिले जित्नु मात्र सधै ठूलो कुरो होईन । हार पनि स्विकार्न सक्नु पर्छ । हार्नु नै जित हो । यो कुरा अहिले बल्ल थाहा पाए । यो कुरामा अहिलेको किशोर किशोरीलाई के भन्न चाहान्छु भने जित्नै पर्छ भन्ने छैन, राम्रो हुनै पर्छ भन्ने छैन, नथाक्नु न हार्नु भन्ने होईन ।
हारलाई स्विकार गर्न सिक्नु र आफू जे हो त्यसलाई स्विकार गर्न सिक्नु भने हामीले निकै जरुरी छ । यो कुरा अहिलेको किशोर किशोरीले बुझ्न निकै जरुरी छ किनभने सामाजिक सञ्जाललेगर्दा पनि मान्छेहरुलाई निकै प्रतिस्पर्धात्मक र जित्नै पर्ने बनाईदिएको छ । अहिलेको किशोर किशोरीहरुलाई निकै गाह्रो छ त्यसैले पनि उनीहरु निराश छन । राम्रो कुरा देखाउन सबैले खोज्छन र आफू भित्रको दुखको कुराहरु कसैले पनि देखाउन खोज्दैनन । नराम्रो कुरा खप्टाउँदै खप्टाउँदै राख्नु भनेको राम्रो कुरा होईन ।
टेक्नोलोजीले आफूलाई प्रयोग गर्न दिनुहुदैन
हामीले टेक्नोलोजीले आफूलाई प्रयोग गर्न दिनुहुदैन । टेक्नोलोजीलाई भने हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ । म आफूलाई म आफू जे हो त्यही रहन सकौँ भनेर झकझकाई रहन्छु । म कहिले पनि पब्लिक र समाजले मलाई बनाई दिएको मान्छे म कहिले पनि बन्न चाहन्न ।
म जे हो म त्यही नै हो । मैले संसारलाई झुठ बोले पनि म आफूलाई झुट बोल्न सक्दिन । मेरो गल्ती अरुले नऔंल्याई दिएपनि मैले त आफ्नो गल्ती देखिरहेको छु । कतिले कति कुरामा मलाई प्रशंसा गरिरहनुभएको छ त्यो हो पनि होईन पनि भनेर त मलाई मात्र थाहा भईरहेको छ ।
त्यहीकारण त्यो चिजबाट म आफूले आफूलाई माथी कहिले पनि पुराउँदिन । अरुले बनाएको मान्छे चाहि म बन्दिन । म जे हो त्यही बन्न चाहन्छु र म अरुलाई पनि त्यही बन्नुहोस भन्न चाहान्छु । हामी सबै जनाको छुटाछुटै सामाथ्र्य हुन्छ । हामीले यो कुरा मनन् गर्न जरुरी छ ।
हामीले अरुलाई हेरेर मैले त्यो चिज किन गर्न सकिरहेको छैन त्यही चिज गर्छु भनेर दौडिने होईन । हामीेले आफूमा भएको क्षमतालाई आफूले नै बुझ्न निकै जरुरी छ । सबै व्यक्ति छुटाछुटै चिजमा राम्रो हुन्छ नै । आफ्नो क्षमताको बारेमा थाहा पाएर त्यसलाई तिर्खादै जानुपर्छ । किताब पढ्ने बानी गर्नुपर्छ । हाम्रो पढाईले धेरै कुरामा परिवर्तन लिएर आउन सक्छ । ज्विनमा हामीले खुशी खोज्दै जानुपर्छ । खुशी सानो सानो कुराबाट पनि पाउन सकिन्छ ।
अहिलेको टेक्नोलोजीले सफलता पाएको मान्छे र चलिरहेको चिजमा मात्र खुशी र सुखी हुन्छ भन्ने बनाई दिएको छ । यो गलतहो । संसारमा सबै चिज राम्रो हुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाँउमा । आफू जस्तो हो त्यो चिजलाई तपाई जब स्विकार्न सक्नुहुन्छ नि त्यो दिन तपाई जस्तो सुखी संसारमा कोही पनि हुदैन । खुशी नै सबैको ईच्छा र चाहाना हो ।
सामाजिक सन्जालमा आएको प्रतिक्रियालाई म पनि हेर्ने गर्छु । मलाई प्राय सकारात्मक र सुधार गर्नु पर्न खालको प्रतिक्रिया आउने गर्छ । म सकारात्मक कमेन्टहरुलाई प्राथमिकतादिने गर्छु । मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोच्ने तरिका हुन्छ । मेरो नजिकको साथी सुख र दुखी बनाउने साथी भनेको नै पुस्तक हो । मलाई कर्णाली ब्लूज निकै मन परेको किताब हो । मैले यो बुक दोहोराएर पनि पढेँ । म संग पुस्तकको कलेक्शन पनि छ ।
नायिका पछि निर्माताको जिम्मेवारी निकै ठूलो हुदोँ रहेछ
अहिले राज्जा रानीको प्रोमाशनका लागि हिडिरहेकी छु । त्यसैगरी मेरो सिनेमा कोहलपुर एक्सप्रेसको सम्पूर्ण काम सकाएर हामी ईडिटिङ्गको काममा व्यस्त छौ । नायिका पछि निर्माताको जिम्मेवारी निकै ठूलो हुदोँ रहेछ । काम गर्ने मानिसहरु हुन्छन विभिन्न डिर्पाटमा जस्तो लागेको थियो । तर, त्यस्तो नहुने रहेछ ।
सिनेमामा अभिनेत्रीको रुपमा पनि छु । यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्न भने अलि गाह्रो भएको थियो । सिने क्षेत्रमा अभिनेत्रीको रुपमा लाग्नु अघि नै म फिल्म मेकिङ्गलाई लिएर निकै सिरियस नै छु ।
आफ्नो सूट नहुदाँ पनि क्यामरा पछाडीको कुराको ज्ञान भने लिने गर्छु । लेन्सको बारेमा पनि थाहा पाईरहन्छु । म यो क्षेत्रको बारेमा सबै कुरा थाहापाएर भने आएको होईन । मैले जे गरिरहेको छु त्यही कुरालाई निरन्तरता दिऊ भन्ने मेरो सोचाई हो ।
बोल्ड ड्रेसले अभिनेत्रीलाई यस्तो हैरानी (फोटो सहित)
घाइते क्रिकेटर बिराट कोहलीलाई भेट्न बैंगलौर पुगिन् अभिनेत्री अनुष्का
सुदूरपश्चिम डडेल्धुराका पाईलट बेद उप्रेतीले सिनामंगल काठमाण्डौमा फेरी अर्को एयरक्राफ्ट म्यूजियम बनाए, सबैले एक पटक हेर्ने पर्ने मनोरञ्जनात्मक प्लेन …